पुर्वक्लब म्यान्युविरुद्ध रोनाल्डोको गोल, तर युभेन्ट्स पराजित - पुर्वक्लब म्यान्युविरुद्ध रोनाल्डोको गोल, तर युभेन्ट्स पराजित
पुर्वक्लब म्यान्युविरुद्ध रोनाल्डोको गोल, तर युभेन्ट्स पराजित
नेपालबहस संवाददाता २०७५, २२ कार्तिक, 09:26:25 AM
टुरिन । क्रिष्टियानो रोनाल्डोले आफ्नो पूर्व क्लब म्यान्चेष्टर युनाइटेडविरुद्ध गोल गरेका छन । आफ्ना पुर्व क्लबविरुद्ध गोल गर्न रोनाल्डो माहिर मानिन्छन । च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेड नै विजयी भएको छ ।
बुधबार राति घरेलु मैदानमा भएको खेलमा युभेन्ट्स युनाइटेडसँग २–१ गोलले पराजित भएको हो । युनाइटेडका लागि हुवान माटाले गोल गर्दा युभेन्टसका एलेक्स सान्ड्रोले आत्मघाती गोल गरेपछि युभेन्ट्स पराजित भएको हो ।
यसअघि म्यान्चेष्टर युनाइटेडको मैदानमा भने युभेन्ट्स विजयी भएको थियो । त्यसको बदला रोनाल्डोले लिएका छन । त्यस्तै, यसै समूहअन्तर्गत गएराति नै भएको अर्को खेलमा भ्यालेन्सियाले योङ ब्वाइजलाई ३–१ गोलअन्तरले पराजित गरेको छ ।
समूह ‘एच’मा रहेको युभेन्टस हारपछि पनि शीर्ष स्थानमा कायमै छ । युभेन्टसको ४ खेलबाट ९ अंक भएको छ । युनाइटेड ४ खेलबाट ७ अंक बनाउँदै दोस्रो स्थानमा छ ।
२०७५, २२ कार्तिक, 09:26:25 AM
बेञ्चबाट गएका शाकिरीको दुई गोल, लिभरपुलले म्यान्युलाई हरायो
म्यान्चेष्टर युनाइटेड साउथह्याम्पटनसँग पनि बराबरीमा रोकियो !
च्याम्पियन्स लिग : आयाक्स र एथेन्सका फ्यानहरुबीच झडप, पेट्रोल बम प्रहार !
लेवान्डोस्कीको ५० गोल पुरा हुँदा वायर्न नकआउट चरणमा
रोनाल्डो र मान्डजुकिकको गोलमा युभेन्ट्सलाई ९ अंकको अग्रता